सरकार भन्छ- फुटपाथमा व्यापार नगर, व्यापारी भन्छन्- कहाँ गएर के खानु? – AayoMail
सरकार भन्छ- फुटपाथमा व्यापार नगर, व्यापारी भन्छन्- कहाँ गएर के खानु?
आयाेमेल संवाददाता २०७७ साउन २९ गते ११:४७
बारा निजगढका संकलन घिमिरे एक दशकदेखि काठमाडौंका सडकपेटीमा जुत्ताचप्पल बेच्दै आएका छन्।
उनका परिवार पनि यहीँ बस्छन्, छोराछोरी पढाउन उनले काठमाडौंमै डेरा लिएका छन्। छोराछोरी पढाउने र घर चलाउने खर्च त्यही व्यापारबाटै आउँछ।
चैतसम्म त ठिकै थियो। व्यापार चलेकै थियो।
चैत ११ गते लकडाउन भयो, अनि उनको स्थिति पनि खस्किन थाल्यो।
पहिल्यैदेखि ल्याएको सामान पनि बिक्री गर्न पाएका छैनन्। चार महिना लकडाउनमा हुँदा उनले पहिले कमाएको रकमले नै जेनतेन घरखर्च चलाए। अब त्यो पनि सकियो।
‘जब कोरोनाका संक्रमित बढ्दै गए, मात्रै लकडाउन खुल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पसल खोलेर पनि दिनमा एक जना ग्राहक पनि आउँदैनन्। दिउँसोको खाजा खाने पैसा पनि आउँदैन।’
लामो समयदेखि व्यापार ठप्प हुँदा अहिले न घरभेटीको भाडा नै तिर्न सकेका छन्, न घरमा पैसा पठाउन नै।
‘अब त यहाँ आफैंलाई भात खाने पैसा उठान पनि नसकिने अवस्था भयो, सुरुका चार महिना लकडाउन नगरेर सीमातिर कडाइ गरिदिएको भए, अहिलेको अवस्थाका लागि हामी तयार त हुन्थ्यौं नि,’ उनले भने।
राजधानीलगायतका देशका धेरै ठाउँमा फेरि संक्रमण बढ्न थालेको छ। दिनदिनै कोरोना संक्रमितको संख्या र मृत्युको संख्या पनि बढिरहेको छ।
उपत्यकामा संक्रमित बढ्न थालेपछि केही दिनअघि सरकारले निर्णय गर्‌यो ‘सडकमा व्यापार नगर्नु, भीडभाड नगर्नु।’
अब सडकपेटीमै व्यापार गरेर जीवन धान्ने ‘संकलन’हरु कता जाने, के गर्ने?
एकातिर संक्रमणको डर, अर्काेतिर भोकै मरिने पिर।
खासगरी पुटपाथमा राखिएका पसलहरु, ठेला तथा साइकलमा राखेर गरिने व्यापारले संक्रमणकाे जाेखिम झनै बढाएकाे सरकारकाे विश्लेषण हाे।
‘अझै फेरि लकडाउनको हल्ला छ, हामीजस्ता फुटपाथमै बसेकालाई हटाउने भन्दैछन् रे। कि त सरकारले हामीलाई खान देओस् नत्र सुरक्षित तरिकारले व्यवसाय सञ्चालन गर्न देओस्’ उनलाई लाग्छ, रोग लागेर भन्दा पनि भोकैले मार्छ कि?
‘जतिबेला केही देखिएकै थिएन, सुरुमै लकडाउन गरेर सरकारले सबैको रोजीरोटी खोस्यो, अहिले भयावह भइरहेका बेला लकडाउन खोलिएको छ,’ आक्रोश पोख्दै उनी भन्छन्, ‘अहिले कि त सरकारले अर्को गरिखाने बाटो सिकाउनुपरो, नत्र भोकै मर भन्नु त भएन नि, अहिले व्यवसाय खोलेर पनि केही व्यापार छैन। सबै मानिसहरुलाई घरबाट बाहिर निस्कन दिइएको छैन, यो पसल खोलेर पनि के काम छ र?’
करिब दुई दशकदेखि रत्नपार्कको फुटपाथमा व्यापार गर्दै आएकी दोलखाकी पम्फा बुढाथोकीको अवस्था झन् दयनीय छ।
पाँच जनाको परिवार त्यही व्यापारबाटै चलाउँथिन्। लकडाउन सुरु भएपछि उनको आम्दानीको बाटो नै बन्द भयो। अहिले उनले चार महिनादेखि घरभाडा पनि तिर्न सकेकी छैनन्।
‘लकडाउनअघि त दैनिक हजार-दुई हजारको व्यापार हुन्थ्यो, अहिले एक÷दुई सय रुपैयाँ पनि हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘मान्छे नै छैनन्, कसरी व्यापार चलोस्। अझै केही महिना यस्तै भए त हामी पनि भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’
सिन्धुलीकी अम्बिका श्रेष्ठ विगत १५ वर्षदेखि रत्नपार्ककै फुटपाथमा व्यापार गर्दै आएकी छन्। श्रीमानले गाडी चलाउँछन्।
तीन बालबच्चासहित पाँच जनाको परिवार एक्लै श्रीमानको कमाइले मात्रै धान्न नसक्ने भएपछि उनले पनि फुटपाथमै भए पनि व्यापार सुरु गरिन्।
उनको कमाइले घरखर्च चल्थ्यो, श्रीमानको कमाइले बालबच्चा पढाउन। तर, लकडाउनपछि न उनका श्रीमानले गाडी चलाउन पाएका छन्, न उनले व्यापार गर्न नै।
‘हाम्रो समस्या कसले बुझ्छ र? पहिले अलिअलि कमाएकोले लकडाउनभर खाँदै ठिक्क भयो, अहिले त घरभाडा पनि तिर्न सकिएको छैन,’ ग्राहक नै आउँदैनन्, ‘दिनभर एकसय रुपैयाँ पनि हुँदैन, यसरी कति दिनसम्म चलाउने हो, लकडाउन गरे पनि सरकारले खानका लागि केही राहत दिए पनि हुन्थ्यो नि?’
अहिले अधिकांश मजदुरको बिचल्ली भएको छ।
ठूला व्यवसायीहरु सरकारसँग राहत माग्दैछन्।
उनीहरुको करोडौंको व्यापार व्यवसाय छ। उनीहरुलाई दैनिक खान लाउन समस्या छैन।
तर, फुटपाथमा व्यवसाय गरेर आफ्नो छाक टार्दै आएकाहरुका लागि रोक भन्दा पनि भोकको पिर छ। कोरोना अभिसाप बनेको छ।
उनीहरु साँझ के खाउँ के लाउँ भन्दै टाउको हात राख्न बाध्य छन्। सँधै भीडभाड हुने रत्नपार्क अहिले सुनसान छ।
त्यहाँ व्यापारमात्रै होइन, दैनिक काम खोज्नेहरु पनि जम्मा हुन्थे। कम्तिमा दुई छाक टार्नकै लागि भए पनि सरकारले राहतको व्यवस्था गरिदिएको भए, जति लकडाउन गरे पनि खासै फरक नपर्ने उनीहरू बताउँछन्।